एन आर एन को टोलीले परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीसंग भेट गर्यो - VOICE OF NEPAL
एन आर एन को टोलीले परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीसंग भेट गर्यो
२ माघ २०७५, बुधबार १७:३७ 264 ??? ???????
संघका उपाध्यक्ष कुमार पन्तको नेतृत्वको गैरआवासीय नेपाली संघको एक प्रतिनिधि मंडलले माननीय परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीसंग भेट गर्यो । संघका पदाधिकारीहरुले मुख्यतया गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धमा भएका पहलहरु बारे जानकारी गराउनु भयो ।
यसका साथै बन्न लागेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान र संविधानको भावना अनुसार गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन लगायत अन्य ऐनमा पनि संशोधन हुनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो । साथै गैरआवासीय नेपालीहरुका विदेशी पत्नी वा पतिलाई नेपाल आउंदा रहनको लागि एक प्रकारको गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र उपलब्ध गराउनको लागि अनुरोध गरियो । यस प्रकारको सुविधाले गर्दा उनीहरुको नेपाल प्रतिको लगाव रहिरहने र नेपालमा लगानी भित्र्याउनका साथै उनीहरुको संलग्नता बढाउन पनि ठूलो सहयोग पुग्ने धारणा पदाधिकारीहरुले राख्नु भएको थियो ।